Komiti yeMhando dzeMoto Yoshushikana neKusabhadhara Magetsi kweMakurukota
Komiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto inoti iri kushushikana zvikuru nekusabhadhara magetsi kunonzi kuri kuitwa nemakurukota ehurumende, vakuru-vakuru muhurumende, pamwe nenhengo dzeparamende, izvo zvinonzi zviri kutadzisa kambani yeZesa kuwana mari yakawanda yekutenga nayo magetsi kubva kunze.
Vamwe vevanhu ava vanonzi vane zvikwereti zvinodarika zana rezviuru zvemadhora pamunhu.
Gurukota rezvemhando dzemoto, VaElton Mangoma, vakaudza komiti iyi neMuvhuro kuti nyika inogona kupinzwa murima kana ikasabhadhara chikwereti chayo kukambani yemagetsi yekuMozambique.
VaMangoma vakati zvikwereti zvine vanhu, mapazi ehurumende pamwe nemakambani kukambani yeZesa zvinosvika mazana mana emamiriyoni emadhora.
Sachigaro wekomiti iyi, VaEdward Chindori-Chininga, vati zvinorwadza zvikuru kuti makurukota aya haasi kudzimirwa magetsi, asi vanhuwo zvavo vane zvikwereti zvemari dziri pasi-pasi vachidzimirwa magetsi.
Mumwe mugari wemuHarare uyo asina kuda kudomwa nezita, audzawo Studio 7 kuti vanhu vasiri kubhadhara magetsi ava vanhu vavakasarudza kuti vavamirire, akati zvinorwadza kuti ndivo vanhu zvakare vave kudzosera nyika kumashure.
Hurukuro nemumwe mugari wemuHarare